Global Voices teny Malagasy » Matanjaka Hatrany Ny Mozikan’ny Fifaharana Ao Ethiopia, Na Dia Eo Aza Ny Famoretana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 22 Jolay 2017 5:10 GMT 1	 · Mpanoratra Endalkachew Chala Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Afrika Mainty, Etiopia, Fahalalahàna miteny, Fanampenam-bava, Fanoherana, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Zavakanto & Kolontsaina, Zon'olombelona
Nandritra ny herintaona, nameno ny zorokelin'ny aterineto Ethiopiana ilay antsoin'ny mpikatroka hoe “hiran'ny fifaharana “. Koa satria lasa niseho bebe kokoa teo amin'ny fiainam-bahoaka sy ny aterineto ny hira ara-politika, dia nitarin'ny manampahefana Ethiopianina tany amin'ny mpanakanto izay hitan'izy ireo ho mpanohana ny mpanohitra ny tetika famoretana ara-politika.
Nanomboka tamin'ny Desambra 2016, nosamborina sy nampidirina am-ponja  ireo mpiangaly mozika malaza Ethiopiana maro izay nifanaraka tamin'ny hetsiky ny mpanohitra miroborobo ao amin'ny firenena. Tamin'ny volana lasa, voampanga tamin'ny fampihorohoroana noho ny tononkira “mandrangitra” sy ny fandefasana ny lahatsarin-kiran'izy ireo tao amin'ny YouTube ny tarika malaza an'ilay mpihira vao misondrotra Seenaa Solomona.
Ho an'ireo Oromos, efa hatry ny ela no tao am- po n'ny hetsika ara-politikan'izy ireo ny hiran'ny fifaharana. Na dia izany aza, lasa nihamafy sy naneho hatezerana kokoa tamin'ny tononkira ny ‘hiran'ny fifaharana’ nandritra ny volana vitsivitsy farany, ary nihamaro ny mpanaraka izany. Ary taty aoriana, na dia ny mpihira Amharic aza izay tsy nihira ampahibemaso ny hira ara-politika aza dia nanatevin-daharana ny hiran'ny fifaharana. Namoaka hira Amharic malaza izay nahitana azy niangavy ny miaramila Ethiopiana mba hanatsahatra ny famonoana olona ilay mpihira Amharic malaza Yehune Belay .
Kanefa toa vao maika mampitombo ny lazan'ny hiran'ny fifaharana ny paikadin'ny governemanta amin'ny famoretana ireo mpihira mpanao fanakianana. Ohatra, nahazo mpijery maherin'ny 3.525.996 ny Yai Gulalle Film , fantsona YouTube tantanan'i Seena Solomon sy ny mpiara-miasa aminy talohan'ny nisamborana azy ireo.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/07/22/103961/
 hiran'ny fifaharana: https://globalvoices.org/2016/01/05/inside-ethiopias-self-defeating-crackdown-on-oromo-musicians/
 nosamborina sy nampidirina am-ponja: https://globalvoices.org/2017/07/14/ethiopian-musicians-charged-with-terrorism-for-inciting-song-lyrics/
 am- po: http://escholarship.org/uc/item/4v51v3wb